Hankahala Ny Fasika Mavo Ao Japana Ny Hoditrao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2016 5:41 GMT
Fambara nentim-paharazana famantarana ny fiavian'ny lohataona ny vovoka mavo na antsoina hoe kosa (黄砂) ao Azia Atsinanana. Mitondra fasika, vovoka, ary antsanga avy amin'ny faritra maina ao amin'ny kôntinanta Aziatika ny rivotra maherin'ny lohataona avy any andrefana, anisan'izany ny Tany Efitra Gobi ao Mongolia sy ny Lembalemba Loess ao Shina.
Mitsoka manerana ny avaratra atsinanan'i Azia ny vovoka , anisan'izany ny Saikanosy Koreana , Japana, ary hatrany amin'ny farany atsinanan'i Rosia ihany koa aza.
“Misy loto maro ny Fasika Mavo.” Sary mampiseho ny fidirany eo amin'ny hoditra. Vovobony (haboka) sy Fasika Mavo, PM 2.5 potin-javatra majinika (volomparasy) miditra amin'ny hoditra amin'ny alàlan'ny masonkoditra . Sary avy amin'ny fantsona YouTube ofisialin'ny ANN.
Tsuchifuru. Sary avy amin'ny fantsona YouTube ANN ofisialy.